कर्पोरेट Archives - नेपाल आज
कर्पोरेट	Corporate category
विश्व बैंकको सहयोगले ग्रामीण सडक निर्माण द्रूतगतिमा
Posted on: April 15, 2017Posted by: netra
बैशाख – २ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय ग्रामीण सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटिपि) अन्तर्गत कञ्चनपुरमा चारवटा सडक निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । सडक निर्माण अन्तर्गत स्तरोन्नति गर्ने र ओटासिल प्रविधि मार्फत कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई दू्रतगतिमा अगाडि बढाइएको छ । भीमदत्तनगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, पुनर्बास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकामा सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको जिल्ला […]
एनसेलमा दुई मिनेट कुरा गर्दा दुई मिनेटै बोनस टक टाइम
चैत्र – ३१ । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकका लागि बोनस टक टाइमका साथ ‘कलआयो बोनस पायो’ अफर ल्याएको छ । एनसेल ग्राहकले अब विश्वकाकुनै पनि देशबाट आएको अन्र्तराष्ट्रिय आगमनकलमा दुई मिनेटभन्दा बढी कुरा गर्दा दुई मिनेटको बोनस टक टाइम पाउनेछन् । नयाँ वर्ष २०७४ को उपलक्ष्यमा ल्याइएको यो योजना यहि बैशाख १ गते […]
किसानले अदुवाको उचित मूल्य पाएनन्
चैत – ३० । अदुवाको उचित मूल्य नपाएपछि सुनसरीको विष्णुपादुका र पाँचकन्या क्षेत्रका किसान मारमा परेका छन् । गत वर्ष किसानले अदुवा प्रतिकिलो रु ५० देखि रु ६० मा बिक्री गरेका थिए । यस वर्ष प्रतिकिलो रु १० देखि रु २० मा बिक्री भइरहेको छ । कृषि उपज केन्द्र धरान–१३ अमरहाटबाट गत वर्ष १० हजार […]
अपीकाे एक बराबर दुई कित्ता हकप्रद सेयर
चैत – २८ । अपी पावर कम्पनीले सेयरधनीलाई एक बराबर दुई कित्ता हकप्रद सेयर दिने भएको छ । कम्पनीको सोमबार राजधानीमा सम्पन्न विशेष साधारणसभाबाट सो प्रस्ताव पारित गरिएको हो । साधारणसभाबाट पारित प्रस्ताव नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ । कम्पनीको हालको सेयर संख्या एक करोड पाँच लाख कित्ता छ । यसबाट विद्यमान एक सेयर […]
यति ब्रुअरीको ‘अर्ना लाइट’ र ‘अर्ना स्ट्रङ्ग’ नेपाली बजारमा
चैत्र – २८ । यति ब्रुअरीले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी अर्ना लाइट र अर्ना स्ट्रंग बियर नेपाली बजारमा भित्र्याएको जानकारी दिएको छ । यति बु्रअरीले नेपाली बियर पारखीहरुको फिट्नेशलाई मध्यनजर गर्दै यी दुई नयाँ प्रोडक्ट नेपालमा भित्र्याएको हो । अर्ना लाइट नेपालको पहिलो र एकमात्र लो–क्यालोरी (कम क्यालोरी भएको) बियर हो जुन “हाइ अन फन, […]
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको एक वर्ष : ४५ हजारले गराए बिमा
Posted on: April 8, 2017Posted by: netra
चैत – २६ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा आठ जिल्लाका ४५ हजार २७७ जना सदस्यले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । सरकारले गतवर्ष २५ चैतमा कैलालीबाट सुरु भएको योमध्ये छ हजार ६७ जनाले उपचार सुविधा लिएका छन् भने आठ हजार ७३८ परिवार सङ्ख्या रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय […]
विश्व बैंकले विद्यालय विकास योजनाका लागि १८५ मिलियन डलर ऋण दिने
चैत्र – १५ । विश्व बैंकले विद्यालय विकास योजनाका लागि नेपाललाई १८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने भएको छ । माध्यामिक विद्यालयको क्षमता वृद्धि, शैशिक गुणस्तर वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुने गरी विश्व बैंकले ऋण सहयोग गर्न लागेको हो । उक्त रकम सरकारले सात वर्षे विद्यालय सुधार कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्ने छ । प्रत्येक वर्ष ३० […]
अाविष्कार केन्द्रलार्इ शिक्षकहरूले दिए ५ लाख
चैत्र – १५ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना अभियानमा लागेका अभियन्ता महावीर पुनलाई रिम स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले रु पाँच लाख सहयोग गरेका छन्। स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका शिक्षकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट गरेको सो सहयोग रकम स्रोतव्यक्ति भरतकुमार पुन र टिकोट माविका प्रधानाध्यापक प्रदीप पुनले अभियन्ता पुनलाई हस्तान्तरण गरे। स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत १० वटा विद्यालयका ९२ जना शिक्षकले […]
वीरगन्ज भन्सारमा राजस्व सङ्कलन एक अर्बले कमी
चैत्र – १४ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने सवारी साधन आयातमा कमी आएका कारण राजस्व सङ्कलन घटेको कार्यालय प्रमुख सेवन्त पोखरेलले बताए । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका जिप तथा कारमा नेपाली बैंकले लगानी गर्न नमानेपछि तिनको आयात घटदा सोको असर राजस्व सङ्कलनमा […]
उद्योगलार्इ बन्द हडतालमुक्त बनाउन अाग्रह
चैत्र – १२ । राजनीतिक दलले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई बन्द हडतालमुक्त क्षेत्र बनाउन पहल गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुराररकाले राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका छन् । तौलिहवा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा तौलिहवामा शुक्रबार सुरु भएको चौथो प्राचीन कपिलवस्तु महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मुरारकाले सरकारले उद्योग व्यवसाय संरक्षण नीति लिए एक दशकभित्रै मुलुकको व्यापार घाटा […]
सौर्य सडक बत्तीको बोलपत्रमा अनियमितता
चैत्र – ५ । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने बोलपत्र आह्वानमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ। सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने भन्दै बोलपत्र आह्वानका लागि भीमेश्वर नगरपालिकाले गत माघ १० गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। बोलपत्र आह्वान गरेको नगरपालिकाले फागुन १२ गते रितपूर्वक तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेकामा सूर्य रोशनी इन्डस्ट्रियल प्रालि […]
Posted on: March 16, 2017March 17, 2017Posted by: Tirtha Khanal
नेपालमा अटोमोबाइल्स व्यापार बढ्दै गएको छ । विभिन्न अटोमोबाइल्स कम्पनीले आफ्नो व्यापार बर्षेनी वृद्धि भएको बताउदै आएका छन् । नेपाली बजारमा भित्रिएको अटोमोबाइल्सको ब्रान्ड र मोडेलको वृद्धिले अटोमोबाइल्स व्यापार आगामी वर्षमा बढ्ने देखिएको छ । धेरैजसो अटोमोबाइल्स कम्पनिले नेपाली बजारमा वर्षेनी नयाँ नया ब्रान्डको मोटरहरु झिकाएका छन । यी सबै तथ्यहरुलाई हेर्दा नेपालमा कार चढ्ने […]
२ अर्ब जिविसको खातामा, दोस्रो किस्ताको पर्खाइमा गोरखाका भूकम्पपीडित
फागुन – २६ । गोरखाको गाँखु–९ गैरीगाउँका सुकमानसिं गुरुङले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले चिरिच्याट्ट परेको घर निर्माण गरिरहेका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर निर्माण सुरु गरेका गुरुङले तालिम प्राप्त कामदार लगाएर भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनाइरहेका हुन्। काठको अभाव झेल्नु नपरेको भए अहिलेसम्म घर बनिसक्थ्योु, सामुदायिक वन […]
सल्यानमा १० प्रतिशतले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि
फागुन – २६ । सल्यानमा चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा झन्डै रु ३० करोडको बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला सुदृढीकरण अभियान बगैँचा व्यवस्थापन, सुन्तलाको बोट तथा क्षेत्रफल वृद्धि, अनकूल मौसमका कारण यस वर्ष उत्पादन वृद्धि भएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सल्यानमा २९ करोड ८१ लाख ३२ हजार बराबरको […]
भेडापालक कृषकलाई ३० लाख अनुदान
Posted on: March 7, 2017March 7, 2017Posted by: netra
फागुन – २४ । म्याग्दीको कालीगण्डकी भेगका भेडापालक कृषकले रु ३० लाख अनुदान पाएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले भेडापालन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि कालीगण्डकी भेडा विकास स्रोत केन्द्रमार्फत अनुदान उपलब्ध गराएको हो । भेडा गोठ, टहरा, खानेपानी, डिपिङ टङ्की निर्माण गर्न स्रोत केन्द्रमार्फत रु ३० लाख ९० हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको पशु विकास […]
लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेकाे छ – प्रधानमन्त्री
फागुन – २४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । एलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज र एनएमबी बैंकले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजी निर्माणका लागि जीवन रक्षक मानिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था […]
फागुन – २१ । भारतबाट अवैध रुपमा कुखुराका चल्ला आउने क्रम रोकिन सकेको छैन । पछिल्लो आठ महिनामा झन्डै डेढ लाख कुखुराका चल्ला यसरी अवैध रुपमा चितवन भित्रिएको छ । एकैपटक १८ हजारसम्म चल्ला अवैध रुपमा आएको पाइएको ह्याचरी उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष परशुराम अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षभरिमा जम्मा ९३ हजार तीन सय ९० वटा […]
लगानी सम्मेलनमा ११ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता
फागुन – २० । लगानी सम्मेलनमा ११ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । काठमाडौमा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा यति ठूलो लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनको समापन समारोहमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ११ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको जनाउँदै यति ठूलो लगानीले उत्साहित बनाएको बताए। सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा एक […]
‘घर आँगन होस् या नदी किनारा, रोपी स्वदेशी फूल बिरुवा बनाऔँ पूर्वाञ्चल हराभरा’
Posted on: March 2, 2017March 2, 2017Posted by: netra
फागुन – १९ । पुष्प तथा आलङ्काकी बोट बिरुवाको व्यावसायिक विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पूर्वाञ्चलका सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामामा प्रथम पूर्वाञ्चल पुष्प व्यापार मेला २०७३ गरिने भएको छ । पुष्पको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न यही फागुन २३ देखि २५ गतेसम्म आयोजना गरिने मेलाको नारा ‘घर आँगन होस् या नदी किनारा, रोपी स्वदेशी फूल […]
नेपाल लगानी सम्मेलन सुरु, नेपाल वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बन्दै – प्रधानमन्त्री
Posted on: March 2, 2017Posted by: netra
फागुन – १९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताएका छन्। ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’को बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले सरकार वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयासमा लागेको बताए । शान्ति र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई […]
बुधबार सुनको मूल्य ४ सयले घट्याे
Posted on: March 1, 2017Posted by: netra
फागुन – १८ । स्थानीय बजारमा उतारचढावपूर्ण रहेको सुनको मूल्य बुधबार तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार प्रतितोला ५६ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार ४ सय रुपैयाँले घटेर ५५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बुधबार चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ । मंगलबार प्रतितोला ८ सय ३५ […]
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भोलिदेखि ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदै
फागुन – १८ । नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका नौ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजधानीमा भोलिदेखि ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदैछ।सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँगसम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजक उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा स्थापित […]
जाजरकोटमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामार्फत ९१ लाख खर्च गरिने
फागुन – १७ । यसबर्ष देखि जाजरकोट जिल्लामा पनि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालनमा आएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि जिल्लामा ९१ लाखको बजेट परिचालन गरिने बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको सचिवालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि स्वीकृत ९१ लाखको बजेटलाई जिल्ला स्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठकले बिषयगत कार्यालय मार्फत खर्च गर्ने […]
बैंकले ऋण रोकेपछि जग्गाको कारोबार प्रभावित
फागुन – १६ । बैंक एवम् वित्तीय संस्थाले ऋण नदिएपछि यहाँ निकै फस्टाएको जग्गाको व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ । घर जग्गा र अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बैंकले सहजै ऋण दिएका छैनन् । कतिपयले महँगो ब्याजदरमा बैंक र सहकारीबाट ऋण लिएर आफ्नो गर्जो टारिरहेका छन् । साना टुक्रादेखि ठूला प्लटसम्म नपुग रकम बैंकको भरमा बैनाबट्टा […]
घरेलु उत्पादनलाई विदेश पुर्याउन महासङ्घले सहयोग गर्ने
घरेलु उद्योगको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले नेपाल हस्तकला महासङ्घ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र उद्यमीसँग संयुक्तरुपमा छलफल गरेको छ । समितिले २८ औँ राष्ट्रिय वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनीको अवसरमा आयोजना गरेको ‘हस्तकला उद्योगका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयमा ती संस्था र उद्यमीसंग छलफल गरेको हो । […]
नेपाल र भारतबीच पाँचौँ द्वीपक्षिय बैठक सम्पन्न
Posted on: February 23, 2017February 23, 2017Posted by: netra
फागुन – १२ । काठमाडौँमा भारत सरकार प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि मण्डलबीच ऋण सहयोगसम्बन्धी ५औँ द्वीपक्षिय बैठक सम्पन्न भएको छ । मंगलबार र बुधबार भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल र भारतका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव अजित गुप्ताले नेतृत्व गरेका थिए । उक्त बैठकमा नेपालमा सञ्चलन रहेका […]
‘सक्षम’ र ‘आईएमई डिजिटल सोलुसन’बीच साझेदारी
Posted on: February 23, 2017Posted by: netra
फागुन – १२ । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आईएमई डिजिटल सोलुसन र संयुक्त अधिराज्यको सहयोगमा सञ्चालित सक्षम कार्यक्रमका बीचमा साझेदारी सम्पन्न भएको छ । डिजिटल सोलुसन लिमिटेड आईएमई ग्रुपको सहायक कम्पनी हो भने सक्षम वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचसम्बन्धी संयुक्त अधिराज्यको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो । यसले नेपालमा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको मोबाइल फोनमा आधारित वित्तीय सेवाहरू […]
भृकुटीमण्डपमा घरेलु औद्योगिक प्रदर्शनी हुने
फागुन – १० । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको आयोजनामा २८औँ औद्योगिक प्रदर्शनी यही फागुन १२ गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ। ‘मेड इन नेपाल गौरव गरौँ, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ’ नाराका साथ हुन लागेको उक्त प्रदर्शनीमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका घरेलु सामग्रीलाई प्रदर्शन गर्न लागेको समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रमेशचन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए। स्वदेशी […]
तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले ल्यायाे ११ उपाय, सवारी कर्जामा कडाइ
Posted on: February 21, 2017February 21, 2017Posted by: netra
फागुन – १० । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत तरलता व्यवस्थापनका ११ उपाय अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम मार्फत अटो लोनमा कटौती लगायतका ११ वटा उपाय सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर डा. नेपालका अनुसार अब निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा […]
Posted on: February 18, 2017Posted by: netra
फागुन ७ । वीरगन्ज नाका भएर रु साढे ३२ अर्बभन्दा बढीको इन्धन आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा यो नाका भएर रु ३२ अर्ब ६३ करोड ३८ लाख मूल्य बराबरको पाँच लाख ४७ हजार ९०५ केल इन्धन र ९९ हजार ३४० मेट्रिकटन खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले […]
फागुन – ७ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरले भूकम्प प्रभावितको जीविकोपार्जनका लागि शुक्रबारदेखि नगद वितरण सुरु गरेको छ ।रेडक्रस भक्तपुरका सभापति मनोजकुमार थापाले चाँगुनारायण–१७ झौखेल निवासी एकल महिला गणेशमाया दनेखुलाई नमुना चेक हस्तान्तरण गरी नगद वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। चाँगुनारायण – ६ र १७ का दुई सय १२ परिवार भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ता बैंक […]
घर निर्माण गरिसकेका पीडितलाई तीन लाख एकैपटक दिइने
Posted on: February 17, 2017Posted by: netra
फागुन – ६ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले पुनःनिर्माण गरिसकेका घरधनीलाई आयोजना कार्यान्वयन एकाइ वा प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकको सुपरिवेक्षणमा अनुदानबापतको रु तीन लाख एकैपटक भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता यामलाल भुसालले जानकारी दिए । […]
फागुन – ५ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई एक करोड २४ लाख ३२ हजार मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको छ। आयोजनाले आजदेखि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। पहिलो दिनमा नै १७ प्रभावित घर परिवारलाई कामु प्रजिअ फणीन्द्रमणि पोखरेलले जामुनेकी ५१ वर्षीया रामप्यारी रानाभाटलाई नौ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँ वितरण गरेर थालनी गरे। […]
भारतद्वारा सिन्धुली प्राविधिक शिक्षालयलार्इ अार्थिक सहयोग
Posted on: February 16, 2017February 17, 2017Posted by: netra
फागुन – ६ । भारत सरकारले सिन्धुली सामुदायिक प्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माणका लागि रु ४ करोड ४० लाख वित्तिय सहयोग गर्ने भएको छ । भारतले कलेजको तीनवटा भवन निर्माणका साथै कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय निर्माणका लागि उक्त रकम दिन लागेका हो । बिहीबार सिन्धुलीको सिन्धुलीमाढीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूतावासका द्वितीय सचिव ज्ञानवीर सिंह, स्थानिय […]
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास अघि बढाइने
फागुन – ४ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले छनोट गरेका १० पूर्वाधार विकासका सोचकर्तासँग आज समिति बैठकमा भएको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। पूर्वाधार विकासमा छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा निजी […]
यामाहा म्युजिकले सूरु गर्यो नेपालकै ठूलो सांगितिक सो रुम
Posted on: February 15, 2017Posted by: Bishow Rimal
फागुन–४ । यामाहा म्युजिकको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु म्युजिक प्रा.लिले काठमाडौंको नक्सालमा नेपालकै ठूलो सांगितिक उपकरण तथा प्रोफेसन अडियो सिस्टमको सो रुम सुरु गरेको छ । नेपालको चर्चित सांगितिक समूह १९७४ एडीले म्युजिक सो रुमको उद्घाटन गरेको हो । नयाँ सो रुममा यामाहा म्युजिकल इन्स्ट्रयुमेन्ट, प्रोफेसनल अडियो सिस्टम, अडियोभिडियो इक्विपमेन्टसहित अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त म्युजिकल ब्रान्ड ‘कोनिग […]
फागुन – ४ । जापान सरकार पोखरामा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्न सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले सम्झौता पत्रममा हस्तारक्षर गए । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा जापानले उपलब्ध गराउने अनुदान […]
नियम विपरीत सवारीबाट रु ५८ हजार राजस्व सङ्कलन
फागुन – ३ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले सोमबार विभिन्न स्थानमा गरेको सवारी कारबाहीबाट ५८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । बिपी राजमार्गमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने र ट्राफिक नियम विपरीत सवारीसाधन चलाउने ४० चालक तथा सवारीसाधनलाई गरिएको कारबाहीबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको हो । बिपी राजमार्गमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने क्रम बढेको गुनासो […]